Zvakanaka Fara Firefox, mhoro Chromium | Kubva kuLinux
Zvakanaka Fara Firefox, hello Chromium
Ichi ndechimwe chezvinyorwa izvo zvinobuda apo kurudziro neshungu zvinokutonga nekuva nechimwe chinhu chitsva chinonakidza kwauri, uye chinosangana nezvimwe zvezvinhu zvakakosha zvaunoda kuti ushandise.
Ndave ndichishandisa kwemazuva akati wandei chromium nekuti Firefox/iceweasel -mudiwa wangu browser- iri kupedza ndangariro zhinji kupfuura zvandinogona kuzvipa. Asi pamusoro pekushandisa pane zvimwe hunhu hwandinofarira nezvazvo chromium uye kuti nemaonero angu vanoifarira kupfuura iyo Panda tsvuku. Hwisisa kuti muchinyorwa chino taura nezve chromium zvakafanana nekutaura nezvazvo Google Chrome.
3 Kufambisa, kumhanya uye maitiro.
4 Firefox isa mabhatiri.
Kunyangwe ini ndisingakwanise kuwana chero chadzo nekuti Google Nyika yangu yakavharika, ndiri kushandisa dzimwe shamwari dzinoverengeka dzakanditumira neemail (ndatenda miriyoni izvo).
Mukana mukuru we Extensions de chromium pamberi peavo ve Firefox ndeyekuti aya akaiswa uye akasunurwa pasina kutanga restart browser. Imwe yekuwedzera poindi -uye zvinoongwa- ndeyekuti hadzishandisike kana iwe uchinge wagadzirisa kune yepamusoro vhezheni yebrowser
Kunyangwe pasina kupokana, zvakadaro Firefox ndiyo Mambo Wekuwedzera sezvo iine zvakawanda kupfuura chromium uye nemhando yepamusoro.
Kunyange zvakadaro Firefox Zvave zviri pamusika kwenguva yakareba, kuchine zvakawanda zvekudzidza maererano nekuvandudza iwo kutaridzika uye chimiro. Sezvo Ndakatokuratidza kare, iyo kutarisa kweiyo Firefox vhezheni 11 Alfa inotaridzika kuva tsvarakadenga, asi izvo zvatiinazvo parizvino ichiri kopi yakaipa (regererai redundancy).
Iyo yakabatana menyu ye Firefox pane kugadzirisa rimwe dambudziko, zvinotigadzirira rimwe. Inoregeredzwa kwazvo, uye kushomeka kwemifananidzo (zvakare inoonekwa muChromium) Uye dzimwe dzesarudzo dzatinowanzo kuve nadzo neyechinyakare menyu bar inoita kuti iratidzike yakashata uye isabudirire.
Zvaunoda mu chromium Iyo ine sarudzo dzakanyatsowanikwa, nenzira inoita kuti zvive nyore kwatiri kumisikidza izvo zvatinoda nekukurumidza uye nyore mutabhu nyowani. With Chrome 17 Tinogona kushandisa email account yedu kuti upinde mubrowser uye tishandise mashandiro akafanana neayo Kubvumirana kweMozilla.
Kufambisa, kumhanya uye maitiro.
Kuti kana, iwe unofanirwa kuve wakanaka. Kune zvinhu zve chromium izvo zvinouya nekutadza zvandisingade. Mune mupepeti WordPress Semuyenzaniso, chromium Izvo hazvichengetedze ma URL andiri kuisa uye mune yakazara screen mode dzimwe nguva inombomira zvishoma.
Firefox isa mabhatiri.
Ini ndinofunga zvatova zvakaoma kwazvo izvo Mozilla dzosera nzvimbo iyo Google zviri kumutora zvishoma nezvishoma uye zvinonyadzisa. Firefox Iwe unofanirwa kushandura zano rako kutenderera uye kufunga nezvekuwedzera zvinhu zvinonyatso kukurudzira mushandisi.
Iko kukura kwakazara kwaakagamuchira Mozilla kutevera matanho ku Google Chrome Izvo hazvina kunyatsoita, kunyanya kana isu tichifunga kuti pakati pega kusunungurwa shanduko uye nhau hazvina basa zvakanyanya. Izvo zvinongopa iko kunzwa kwekuti iwo zvigamba zvakawedzerwa kune Firefox.
Kunyangwe vazhinji vasingade kuzvigamuchira, kazhinji zvinhu zvinouya kuburikidza nemaziso uye kugadzirisa patsva pakuonekwa kwe Firefox hapana chakaipa chaizouya. Kubva mumaonero angu -uye ini handisi nyanzvi mune dhizaini dhizaini- Firefox iwe unoda chimwe chinhu chakareruka, chiri nyore, chinoshandisika uye chinonzwisisika kumushandisi.
Izvi hazvireve kuti ndicharega kushandisa, kana kusunungura firefox, asi anga ave mazuva akati wandei kubvira akamira kuve iye Browser default mandiri SO. Zvakare, ini ndinoshandisa iyo kugadzira zvimwe zvidiki zvinhu. Ndinovimba kuti ramangwana shanduro dzichaita kuti ndichinje pfungwa dzangu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » GNU / Linux » Zvakanaka Fara Firefox, hello Chromium
Ndakafunga zvakafanana, asi ndakadzokera kuFirefox.
Kana ichizoshandiswa palaptop, taura zvakanaka, inoshandisa zviwanikwa zvakawanda (mubhurogi rangu enzanisa Chromium 13 neFirefox 7 nemapeji akafanana akavhurwa uye kushandiswa kweChromium kwakashata).
Iwe murume, asi Chromium yatove pane vhezheni 17. Ini ndinofunga kuenzanisa kwawakaita kwanga kusiri kururamisira ... 😀
17? Yekupedzisira yandinayo ndeye 15 pane yangu Archlinux ...
Sezvo uchireva iwe kuti hazvina kunaka?
Hahaha ndizvozvo unogona kuona kuti Arch haigare iine ichangoburwa. MuUbuntu naDebian hongu hahaha. Kana ndikakuudza kuti kuenzanisa hakuna kunaka, imo nekuti Firefox 7 inogona kunge iri nhanho kumberi kweChromium 13 maererano nemaficha uye mashandiro. Chimwe chinhu chakanaka kungave kuenzanisa Firefox 8 neChromium 15 kana Chromium 17. 😀
Hahaha ndiudze zvaunoda .. Asi hauna muArchlinux 😛
Sezvo ini ndichiibvarura zvishoma, ini handishandisi Chromium hahahaha
Ndinoziva, asi zvinogara zvakanaka kubata mazai zvishoma, handiti? 😀
Elav nemazwi ako iwe unongoratidza zvishoma zvaunoziva nezve Arch Linux, chero munhu anoda kuisa iyo dev, git, nezvimwe vhezheni yechromium, chrome kubva aur pasina dambudziko. 😀
Kwete izvozvo chete, asi kubva kumahofisi epamutemo
Ichokwadi kwazvo, ini ndinofunga chromium yakareruka, kwete yakawanda se midori, asi yakareruka kupfuura chromium, zvakare ine masimba akafanana ne firefox uye sezvamakataura, firefox inoramba ichitonga zvinowedzera, asi pane zvinhu izvo zvichiri kutinetsa uye Iko ndangariro yekushandisa, uye kazhinji kazhinji inorema zvekuti inopunzika, kana zvirinani kwandiri kana zvaitika kwandiri, semifananidzo, zvinotora nguva kuvaratidza kunyangwe vakatotakurwa.
Ichokwadi kwazvo, ini ndinofunga chromium yakareruka, kwete yakawanda senge midori, asi yakareruka kupfuura chromium
Chromium yakareruka kupfuura Chromium?
Usatsamwire, isu tese takanzwisisa kuti aireva Firefox ... ndinokuvenga EMO, ndinokuvenga ..
Zuva iro boka remimhanzi parinonditsvaga, ini ndinokutumira maemail ane nziyo uye unozviyera, ngatione kuti vangani hahahaha.
Iwe unoziva nemataipi ekukanganisa, zvakashata kwazvo
ptssss, hahahaha vandinzwisisa kani? hahahaha, kurota kwangu kwanga kuchiri pakakwirira, asi sezvo ndichiifarira pano, ndicho chinhu chekutanga chandakavhura hahaha, ndisati ndavhura peji rangu rebasa
Kunakidzwa ipapo hahaha, zvakanaka kuziva kuti isu tiri mune ako aunofarira 😀
Emo isectus rastrerus beatablus, ivo vanoungana pamwechete kuti varohwe, zvinonzwisisika ne grimace inovhara ziso rimwe (kusiyana neGrunge inovhara maziso ese maviri) ivo vanowanzo pfeka hembe nhema ne pink, macheni mazhinji, ayo avanotora kubva kuna Fine imbwa avo ari yakakosha kupfuura dzimba dzavo, kana kwete, nekuti panguva ino chero munhu anogona kuve emo asina kana kuva nemari yakawanda, sezvo kuve emo kuri mukati mekusvikira kwemunhu chero ane vhudzi rakaringana uye maeuro makumi mapfumbamwe ekuenda kunogadzira bvudzi mwedzi wega wega, vanouya nemafuta akawanda kupfuura musikana wako, uye kana usiri murume kana tortillera, kupfuura amai vako, musoro wenyaya wavanofarira kuzviuraya uye sezvo vabereki vavo vakatonhorera zvekuti vanovatenga vovarega vari izvo zvavanoda, vanokanganisa hupenyu hwavo «Pamwe nenzanga isingavanzwisise», vanopedza nguva yavo kuteerera Panda, The Sixth Label kana chero bhendi rinotaura nezvekuti vasikana vavo, nzanga kana mhuri yavo vanovatora sei kubva pasirese nemapenzi mazwi uye "Punk" mimhanzi. Unogona kuzviwana zviri nyore munzvimbo dzine rima uye dzisingatyisi dzaunowana, kana pane pane pombi michina. Ukavaona vega kana mumapoka varove. Kana iwe uchifunga kuti ichi chakanakira munhu mumwe chete, fonera dzimwe shamwari. Kana iwe ukaneta nekuvarova kuti vazorore, usazvidya moyo, hapana kwavachaenda.
Iwo maEmos anovakira hupenyu hwavo pakusiya ruoko rwavo sedhongi reMandrill (Bhuruu) nekuti yavo yekufungidzira musikana / baba / mukomana akavarwadzisa ... mhinduro chete kwavari ndeyekuzvikuvadza ivo pachavo ...
Hahahahahahaha ndinowana emo, ndoti ndinodonhedza hahahaha
Ruregerero kupindira kwangu, asi ini ndinofunga Kushinga hakusi emo, iye ari ... ndine hurombo ... kana iri imwe nzira yakatenderedza?, Ndinofunga ndine mhirizhonga, HAHAHAHA.
PS: Ushingi ndinovimba haunetse.
Ehe, ini ndakaona ongororo nezuro Loquendo a los emos uye handione kuti ndakagara sei
Hahahaha huya, mira bhuru rako uye utaure nezve maemos kune rimwe divi kuti usabvisa pano
PS: Ini ndatoverenga iyo Geekpedia
usamboshandisa iyo oxygen theme mu firefox.
Mhoro Elav. Zvinoita seiko kuti Google yakavharira nyika yako? Kwaunogara?
Ehe hongu, muCuba Google yakavharira akawanda masevhisi:
- Kodhi Google
- vamwe vazhinji…
Ehe, ini zvakare handikwanise kuwana Gmail, nekuti ISP yangu inonditadzisa kuita kudaro.
Kambani inovharira nyika yangu x kana y, uye ini ndaisazoshandisa chero yadzo kana kubhadharwa, asi zvakanaka, musoro wega wega wakasiyana.
Chokwadi, sezvo ini ndisingashandise chero chinhu kubva kuGibson kukwidziridza mitengo, ini ndinosarudza kuti thev ichengete ivo vaise makuru eDebian stickers.
Ini handifarire mumwe munhu nekuda kwechikonzero X uye ini handishandise chero chavo
Ndakarega kushandisa firefox seye default browser rinopfuura gore rapfuura, ini ndinogara ndichiisa firefox seshamwari yechipiri kuvhura mazana mana emamacomputer maakaundi ayo andinotarisira mazana masere ekuzivikanwa kwenhema kugadzira mablog anowanza internet zvakanyanya neshiti.
Ini ndinobvumirana newe kuti roketi iyo mozilla yawana izvozvi kuvhura vhezheni ye firefox maminetsi mashanu asina CHINHU chitsva uye kuti kana mushandisi wepakati achizviita, havazombozviona, zano risiri Rinozokuchengetedza kubva pakurasikirwa zvimwe uye vamwe vashandisi ku chrome.
Chero ani anondiziva anozivawo kuti zvirongwa zvinondipinda kuburikidza nemaziso angu xD
Uye firefox ichiri kungoda kunge yakashata senge muna 2004, nepo chrome ine yakapfava zvikuru. Ivo vanofambisa mabhatani nemamenyu kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe zvisina zvazvinoreva, ndinofungidzira izvozvo kunyepedzera kuti vanoda kutevedzera chrome interface. Kopa uye zvino, chii dhongi. Chokwadi chinondiremera zvishoma pamusoro pangu nezvose. Iyo panda yakanganisa kwazvo kunge gava pasi rose inounza ndangariro dzakanakisa dzemuchato wangu kuinternet, uye ndinoda kumuona achiberekwazve pane kuita kunge akanyudzwa mugungwa remafungiro akashata kana kushandisa zvisirizvo mazano akanaka.
Zvirongwa zvinopinda kuburikidza nemaziso ako here? HAHA… zvobva zvashamisa kuti sei usingade KDE LOL !!!
Kugamuchirwa kunzvimbo ino Gabi 😀
Super kuseka iyo 1st ndima hahahahaha.
Ndakarega kushandisa firefox seye default browser rinopfuura gore rapfuura
Wako MushandisiAgent ari kundiudza neimwe nzira haha
Uye firefox ichiri kungoda kunge yakashata senge muna 2004, nepo chrome ine yakapfava zvikuru. Ivo vanofambisa mabhatani nemamenyu kubva kune rimwe divi kuenda kune rimwe zvisina zvazvinoreva, ndinofungidzira izvozvo kunyepedzera kuti vanoda kutevedzera chrome interface. Kopa uye zvino, chii dhongi
Kwete, hausi mubvunzo wekuteedzera, nekuti kunenge kuri kushomeka kwekutanga kwevagadziri, zvirinani kuti vavandudze
Chengeta Chromium zvirinani pane Debian uye Ubuntu